शेयर बजार सकारात्मक प्रवृत्तिमा जाने संकेत आएकै हो?
काठमाडौं, असार २४ : साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ९२ ले वृद्धि भएर १२५० दशमलव २७ को विन्दुमा पुगेको छ।
दोस्रो बजार परिसूचकमा ० दशमलव २३ प्रतिशतकोे वृद्धि देखिएको छ। दोस्रो बजार १२४७ दशमलव ३५ को विन्दुमा खुलेको थियो भने १२५२ दशमलव २० को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो। आज बजारको न्यून विन्दु १२४४ दशमलव ३६ थियो। दिनभरमा ४६ करोड ८२ लाखको शेयर किनबेच भएको छ।
आज सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको ६ करोड २ लाख बराबरको संस्थापक शेयर किनबेच भएको छ।
आज इन्फिनिटी लघुवित्तका शेयरधनीले सर्वाधिक ९ दशमलव ८५ प्रतिशतले कमाए भने सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सका शेयरधनीले सर्वाधिक ४ दशमलव २८ प्रतिशतले गुमाए।
लाभांस प्रस्तावबिनै प्रभु इन्स्योरेन्सले साउन १७ गते वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ। वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनाका निमित्त कम्पनीले साउन ३ देखि श्रावण १७ गतेसम्म बुक क्लोज गर्दैछ। साउन २ गतेसम्म कायम रहने सेयरधनी मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन्।
अघिल्लो कारोबार दिनको निष्कर्ष अनुसार, बजारको तत्कालीन प्रतिरोध १२५५ र तत्कालीन टेवा १२३७ भनिएको थियो। आज बजार यी दुबै क्षेत्रभित्र उतारचढाव हुँदा नेप्से परिसूचक १२५० दशमलव २७ अंकमा बन्द भएको छ।
चित्र नं १, नेप्सेको दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्ति बमोजिम आज बजार १२३७ को टेवा क्षेत्रभन्दा माथि नै रहेको छ। यो टेवा क्षेत्रमा कारोबारीहरु बजार प्रवेश गर्न सक्ने संकेत गरेपनि निश्चित रुपमा गरेको देखिँदैन। आजको परिमाणले भने बजार सामान्य रहेको संकेत गरेको छ।
चित्र नं.२, दुई दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई पाँच मिनेट समयावधिका मैनबत्तीलाई प्रयोग गरिएको छ। हिजो बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहे पनि आज बजारको प्रवृत्ति सकारात्मक देखिएको छ।
आजको कारोबारमा २१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)ले ‘गोल्डन क्रस’ बनाएकाले बजार बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। आज कारोबारको अन्तिम समयमा रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ५५ दशमलव ६४ अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले आज ‘बुलिस डाइभर्जेन्स’ बनाएकाले बजार आज सकारात्मक क्षेत्रमा रहेको संकेत गरेको छ।
स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले कारोबारको अन्तिम समयमा बजारमा बढी शेयर विक्री भएको र उप्रान्त क्रेताको चाप हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
माथि उल्लेखित छोटो समयको नेप्से प्रवृत्तिहरु र सूचकहरुको आधारमा यदि बजार १२५३ भन्दा माथि स्थिर रहन सके बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ र तत्कालीन प्रतिरोध १२६५ को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, यदि बजार १२४४ भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ। अर्को तत्कालीन टेवा १२३७ मा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Tuesday, 9th July 17:45:00 PM
साताभर शेयर बजारमा अत्यधिक उतारचढाव
सकारात्मक बन्दै शेयर बजार, अब के होला?
अर्थमन्त्रीको सकारात्मक अभिव्यक्तिले शेयर बजारमा चमक
किन लाग्यो नेप्से ठाडै ओरालो ?
शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट, विक्रेता आत्तिएको अवस्था
शेयर बजारमा आज क्रेता र विक्रेताको चाप लगभग बराबर
आज पनि शेयर बजार घट्ने निरन्तरतामै
शेयर बजार पुनः १२०० को क्षेत्र नजिक
शेयर लगानीकर्ता अन्योलमा